Jwxo-shiil, oo Hanjabaad Horleh Soo Saaray – Rasaasa News
Sep 17, 2011 Jwxo-shiil, oo Hanjabaad Horleh Soo Saaray
Copenhagen , Sep 17, 2011 [ras] – Kooxda Jwxo-shiil, oo mar labaad todobaad gudihii soo saaray hanjabaad ay ku waxyeelaynayaan xubnaha kooxda fanaaniinta ah ee Waayaha Cusub, oo uu saldhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kooxda fanka ee waayaha cusub ayaa dhawaan waxay dhawaan booqasho ku tageen degaanka Somalida Ethiopia, iyaga oo bandhig faneedyo ka dhigay xarunta degaanka Somalida ee Jijiga munaasabadii ciidul fidriga iyo magaalooyinka Dire Dawa iyo Addis Ababa.
Hanjabaada ay kooxda Jwxo-shiil, soo saartay ayaa ku saabsan in la dilo fanaaniinta waayaha cusub kolka ay ku laabtaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hanaanka loo waxyeelaynayo mayna faahfaahin kooxdu.
Fulinta falka waxay kooxdu u xilsaartay dhawr xubnood oo wali ku dambeeya dalka Kenya oo ay ka mid yihiin; Cabdi-nuur yare, Amaadin, Maxamed Shariif iyo Cali Dheere.
In kasta oo ayna kooxdu waxba wakhti xaadirkan waxba ka fulin karin Kenya, ayaan hadana la fududaysan karin hanjabaada ay soo saareen, maadaama ay kooxdu ku xidhan tahay Eritrea oo wax waliba ka suurtoobo ayna dhici karto in laftigeedu ay arimaha fuliso.
Waxaa kaliya oo la gudboon dadka ay kooxdu u hanjabtay in ay ka taxadaraan hanjabaada oo ayna fududaysan. Waayo kooxda Jwxo-shiil, waxay u gundatay laynta dadka Ogadeenka, hadiiba ay awoodo.
Xubno ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil oo Muqdishu Lagu Soo dhaweeyey